Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Mexico oo Joojiyay Booqasho uu Maraykanka Ku Tagi Lahaa.
Madaxwaynaha Mexico oo Joojiyay Booqasho uu Maraykanka Ku Tagi Lahaa.
Madaxweynaha dalka Mexico Enrique Pena Nieto ayaa baajiyay safar uu ku tagi lahaa wadanka Maraykanka todobaadka soo socdo si uu ula kulmo madaxweyne Maraykanka Donald Trump.
Go’aanka ayaa yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inay fiicnaan lahayd in madaxweynaha Mexico uu iska baajiyo safarkaasi haddii Mexico aysan diyaar u ahayn inay bixiso lacagta lagu dhisayo darbiga xadka labada dal u dhexeeya. Dhismaha darbiga ayaa la sheegay inay ku bixi doonto $15 bilyan.
” Haddii Mexico aysan diyaar u ahay inay bixiso darbiga aan aadka ugu baahanahay, waxaa markaasi ila quman in madaxweynaha mexico uu baajiyo kulankii aan yeelan lahayn.” ayuu yidhi Trump. Mexico ayaa sheegtay inaysan bixin doonin kharashaadka darbiga uu Donald Trump ka dhisayo xadka Mexico iyo Mareykanka.
Enrique Pena Nieto oo qaranka khudbad u jeedinayay ayaa gaashaanka ku dhuftay qorshaha dhismaha darbiga isagoo intaa ku daray in ”Mexico aysan aaminsanyn dhismaha darbiga”. Donald Trump ayaa horay u sheegay in Mexico ay bixin doonto qarashaadka darbiga uu qorsheynaya inuu ka dhiso xadka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa soo saaray warqad uu ku amrayo in la billaabo dhismaha derbiga xuduudda Mexico.
Dhismaha derbiga dherirkiisu yahay 2,000 oo meyl, wuxuu ahaa mid kamid ah ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa ee Trump, xilligii ololaha doorashada.
Wuxuu ka hadlay “musiibo” ka taagan xuduudda dhanka Koofureed ee Mareykanka uu Mexico kala wadaago. Hadalkaas wuxuu jeediyay xilligii uu saxiixayay amarka. Wuxuu sidoo kale la hadlay qaar ka mid ah ciidamada amniga gudaha ee Mareykanka ka shaqeeya. Amarka waxaa qeyb ka ah in la shaqaaleysiiyso 10 kun oo ciidamo oo suga amniga xuduudda.
“Dal aan xuduud lahayn, dal maaha,” ayuu yiri Trump. “Laga billaabo maanta Mareykanka wuxuu dib u soo ceshanayaa maamulidda xuduudeeda.” ayuu raaciyay Trump. Donald Trump wuxuu sheegay in xidhiidhka Mexico uu la wadaago uu wanaagsanaan doono.